Royal Big Cat: လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်လေးတွေ
Showing posts with label လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်လေးတွေ. Show all posts
အင်ဒိုနီးရှားမှာ မြန်မာတွေ အသတ်ခံရတာကျတော့ မြအေး ဘာမှမပြောဘူးလား အင်ဒိုနီးရှားမှာ မြန်မာတွေ အသတ်ခံရတာကျတော့ မြအေး ဘာမှမပြောဘူးလား .. ၈ပူးက ကို မင်းကိုနိုင်ကြီးလဲ တစ်ခုခုတော့လုပ်ပါဦးဗျ .. ပြည်တွင်းက မူစလင်တွေလဲ အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှေ့ မှာ အသတ်ခံရတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် ဆန္ဒပြရှုတ်ချပွဲတွေ မလုပ်ချင်ကြဘူးလား .. မြအေးက ၄၈ လမ်းဗလီမီးလောင်တုန်းက မျက်လုံးထဲမီးခိုးမွှန်သွားလို့ အင်ဒိုနီးရှားက မြန်မာတွေအသတ် ခံရတာကို မမြင်တော့တာလား? မြို့ထဲမှာ နေပူထဲမှာ စတစ်ကာတွေလိုက်ကပ်နေတဲ့ မာမူ တွေကရော အင်ဒိုနီးရှားသတင်းမတွေ့ကြသေးတာလား? ဟိုကောင်ကြီး ကင်တားနွားရော ဘယ်ပျောက်နေလဲ? အိုအိုင်စီလဲ အဲ့ဒီ့သတင်းကို မသိကြဘူးနဲ့တူတယ် .. ကိုမင်းကိုနိုင်ကြီးနဲ့ ၈ပူးတွေကတော့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်၊ တင်းတင်းမာမာ ၀င်မ ပြောရဲဘူးဆိုတာကို ကျနော်နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် .. ၈ပူးတွေရဲ့ ထမင်းရှင် မူစလင်တွေကို ၈ပူးတွေ မစော်ကားရဲတာ သဘာဝကျပါတယ် .. မြန်မာစကားပုံမှာတောင် ရှိသေးတာပဲ "တစ် လုတ်စားဖူး သူ့ကျေးဇူး" တဲ့ .. အခုက ထမင်းတစ်လုတ်တင်ဘယ်ကပါ့မလဲနော် .. ကိုမင်းကို နိုင်ကြီးတို့ စီးနေတဲ့ ကားအကောင်းစားကြီးတွေ၊ ၈ပူးတွေရဲ့ရုံးခန်းတွေ အသုံးအဆောင်တွေ၊ ၈ပူးတွေရဲ့ လှူပ်ရှားမှူအတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေ အားလုံးကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေ မြအေးနာမည်နဲ့လွှဲပြောင်း ထောက်ပံ့ပေးနေတာဆိုတော့လဲ ကျေးဇူးကဆပ်လို့ဘယ်ကုန်နိုင် ပါတော့မလဲ? ကျနော် နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ် .. တစ်ခုလောက်တော့ မေးပါရစေနော် .. ၈ပူးပါတီကို ဘယ်သူဦးဆောင်မှာလဲ? ဒီပုံစံဆိုရင်တော့ မြအေးပဲ ဦးဆောင်မှာပေါ့နော် .. ကို မင်းကိုနိုင်တို့ကတော့ မူစလင်တွေရဲ့ရုပ်သေးရုပ်လေးအဖြစ်ပဲ ဒီဘ၀ကို အရိုးထုတ်လိုက်ပါ တော့ .. လွှတ်တော်ထဲက ရွှေမောင်အတွက်လဲ အဖေါ်ရတာပေါ့ဗျာ .. နောက်နှစ်အနည်းငယ် မှာ လွှတ်တော်ထဲကို မြအေးကြိုးဆွဲပေးမယ့်အရုပ်လေးတွေရောက်လာနိုင်တယ် .. အမတ် ရာထူးက မပြုတ်အောင် တောင့်ခံထားဦး မာမူရွှေမောင်ကြီးရေ .. သာသနာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့ ကန်တော့ပွဲနဲ့တောင်းပန်ပွဲကရော ဘယ်နေ့လဲ? မာမူကြီး တို့နဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌါနကတော့ အကျိုးပေးတယ်နဲ့တူတယ်နော် .. မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၁၂၊ ၈ လပိုင်းမှာလဲ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌါနရှေ့မှာ မာမူကြီးတို့တွေ ၀န်ကြီးကို ပုဆိုးမလှန်ပြယုံ တမယ် ပိုးစိုးပက်စက်ပြောနေတာလေး မြင်ယောင်မိပါသေးတယ် .. အော် ငါတို့သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌါနလဲ သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာနော် .. မာမူကြီးတို့က ငယ်နိုင်လိုဖြစ်ပြီး အနိုင်ကျင့် ကြတာကို ခံနေရရှာတယ် .. အင်း သာသနာရေးဝန်ကြီးတင်မဟုတ်ပါဘူး ရန်ကုန်တိုင်းက တော်တော်များများကို မာမူကြီးတို့ကငယ်နိုင်ပဲလေ .. အခုတောင် မာမူကြီးတို့ ကျွေးမွေးပြီး ခြံစောင့်တတ်အောင်သင်ထားတဲ့တချို့သောအကောင်ခပ်ထွားထွားတွေက မာမူကြီးတို့ ဆန္ဒအတိုင်း ၉၆၉ ကို စတင်ဖြိုခွဲပေးနေပြီလေ .. ကြုံတုန်းလေး မာမူကြီးတို့ကို အကြံတစ်ခု လောက်ပေးပါရစေ .. ရခိုင်ပြည်နယ်ကို မူစလင်တွေအတွက် သီးခြားပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် တောင်းဆိုမယ့်အစား ရန်ကုန်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ကြပါ .. အဲ့ဒါက မာမူကြီးတို့အတွက် ပို လွယ်ပါတယ် .. ရန်ကုန်ကိုသိမ်းပိုက်ချင်ရင် မာမူကြီးတို့အတွက် သိပ်အခက်အခဲမရှိတော့ ဘူးလေ .. (၁)ရန်ကုန်မှာ မာမူတို့လူမျိုးတွေ စီးပွါးရေးတွေ စိုးမိုးထားကြတယ် (၂)ရန်ကုန် မှာ မာမူတို့လူမျိုးတွေ ခွဲထွက်နိုင်လောက်တဲ့ လူအင်အားရှိတယ် (၃)ရန်ကုန်မှာ မာမူတို့အ ဆင်သင့်သာသနာပြုနိုင်လောက်တဲ့ မြောက်များစွာသောဗလီတွေ အဆင်သင့်ရှိနေတယ် (၄)ရန်ကုန်မှာ မာမူတို့ ငယ်နိုင်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌါနရှိတယ် (၅)ရန်ကုန်မှာ မာမူတို့ ကျွေး မွေးပြီးလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ အကောင်ခပ်ကြီးကြီးတွေရှိတယ် (၆)ရန်ကုန်မှာ မာမူတို့ ကြိုး ဆွဲတဲ့အတိုင်း ကပေးမယ့် နိုင်ငံရေးဆရာကြီးတွေ၊လူ့အခွင့်အရေးဆရာကြီးတွေ၊ ၈၈ ရုပ် သေးရုပ်လေးတွေရှိတယ် .. ကဲ ဘာလိုသေးလဲ မာမူတို့ရယ် .. ဒီလောက်ဆို ကျနော်တို့ရဲ့ မဟာရန်ကုန်ကို သီးခြားခွဲထွက်ခွင့်တောင်းဖို့ မလုံလောက်သေးဘူးလား .. အမြန်ဆုံး သိမ်း ပိုက်တော်မူပါတော့ ..
ဒီလူနာမည်က Daniel လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မဟုတ်တာတွေလုပ်တာများတော့ နေမဖြစ်တော့လို့ စလုံးကိုထွက်ပြေး။ စလုံးက ကလေကချေမို့ လက်မခံတော့ မလေးရှားဘက်ကူး။ မလေးမှာလဲ လက်ကြောမတင်းတော့ UN မှာ
လိမ်ညာဇတ်လမ်းဆင်ပြီး ဒုက္ခသည်လျှောက်ပြီး ကံကောင်းတော့ ၂ နှစ်လောက်နဲ့ US ကိုရောက်လာတဲ့သူပေါ့။ ဒီလူကတော့ ဘယ်လိုအတွေးအခေါ်အိုက်ဒီယာတွေ သုံးပြီး ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့လို့ ရောက်လာတာလို့ လေကြီးလေကျယ် ကြွားလုံးထုတ်လေ့ရှိတယ် ။
အခြားလူမျိုးတွေရှေ့မှာ မြန်မာဆိုတာ မလိုအပ်ရင်မပြောနဲ့တဲ့ဗျာ ။ မြန်မာလို့ပြောရမှာ သိပ်ရှက်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖိလစ်ပင်းက၊
မလေးရှားက လာတာလို့ လျောက်ပြောတတ်တယ်။ ဒီလူရဲ့ စကားလုံးတွေတိုင်းဟာ ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးမကောင်းကြောင်း ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မကောင်းကြောင်းနဲ့ အမေရိကန်တွေ ဘယ်လိုတော်ကြောင်း ကောင်းကြောင်းဖြစ်လို့နေတယ်။ သူက FNG မှာ It Doesn't TakeaHero ကို ( သူရဲကောင်းဆိုတာ ) ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တတ်ပြီး ဘာသာပြန်ရေးပါတယ်။ သူ့သားသမီးတွေဟာ နုံချာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိတွေ့စရာမလို၊ မြန်မာတွေနဲ့ဝေးတောင် မြန်မာစကား လုံးဝသင်မပေးတော့ဘူးလို့ ပြောတာ အသည်းနာဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီလူ သူဟာသူ အမေရိကန်အထင်ကြီးတာ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်တာ၊ သူဘာသာ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ဘယ်လိုရောက်ရောက် ပြောစရာမရှိပေမဲ့ သူပြောဆိုနေတဲ့ သူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားဟာ ကျုပ်နိုင်ငံ ကျုပ်လူမျိုးကို စော်ကားတယ်လို မြင်လို့ အခုလိုဖွတာဖြစ်တယ်။ ဒီမူဗီက သူမလေးရှားမှာနေတုန်းက မြန်မာမလေးတစ်ယောက်ကို ဒုက္ခသည်ကတ် ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလိမ်ပြီး ခေါ်စားထားတဲ့ မူဗီဖြစ်ပါတယ်။ မူဗီတွေကျန်ပါသေးတယ်။ ဒီလူအနေအထိုင်မဆင်ခြင်ရင် ထပ်ပို့ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ Facebook က ဒီမှာပါ https://www.facebook.com/dnlkane
မြန်မြန်တင်ပေးပါနော် ကိုချက်ကြီး ကျေးဇူးပဲ
တောင်းဆိုထားသူ သားကြီးအတွက် အာရှသူ အလန်းလေးတွေ ပုံပါ
ကိုချစ်ကြီးက မိန်းကလေးတွေတော့တင်တယ် ။
ကျမတို့သိက္ခာကျသလို သူတို့ လဲသိက္ခာရှိနေကြတာပဲ သူတို့ လဲ မိန်းကလေးတွေကိုဖျက်ဆီးပြီ စွယ်နေကြတာပဲ
ကျမနဲ့ရိုက်တဲ့ကားတွေကြတော့ အကိုတို့ ဆိုဒ်တွေထဲဘယ်လိုရောက်ေ
ုလိုက်လိုးနေတဲ့အကောင် စင်္ကာပူကမိန်းမတွေ သူ့ကို သတိထားလို့ ပြောပေးပါ ။
ကျမကတော့ ဖာတန်းရောက်သွားပြီ ။
ငွေပဲရှာတော့တယ် ။ ကျမဗွီဒီယိုတွေ ခင်များတို့ဆိုဒ်တွေထဲမှာတွေ့
ပြောမှာပေါ့ခင်များကတော့ မင်းဟာမင်ဖင်ခံလို့ ရောက်တယ်လို့ 
မှန်တယ် .. ကျမကလဲ အဲဖုန်းမင်းဆိုတဲ့ကောင်ဘ၀ပျက်မှ
@dr.chat gyi မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်... မိမိတင်လိုသည်များကိုလည်း royalbigcat2013@googlemail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်.. .comment ရေးသွားချင်လျင် no comment သို့မဟုတ် comment ကို ကလစ်ပါ..
30.1.2013-ည-(၈း၀၀)-ခန့်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်မှာ၊ မုဒိမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ကျင့်သူက ထုံစံအတိုင်း မူဆလင်ကုလားပဲပေါ့။ ခံရသူကလည်း သိတဲ့အတိုင်း မြန်မာမိန်းကလေး တစ်ယောက်ပါပဲ ။
မူဆလင်ကုလားကတော့ အသက် ၁၇-နှစ်၊ ၁၈-နှစ်ခန့်ရှိပြီး မှော်ဘီအာရဗီကျောင်းမှာ အထက်တန်း ဘာသာရပ်ကိုသင်ယူရင်း သာကေတမှာ ကလေးသူငယ်လေးတွေကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဘာသာရေးကျောင်းဆရာလေးပါ။
မြန်မာ မိန်းကလေးအမည်က မသီတာဦး ဖြစ်ပြီး၊ အသက်က (၁၃)နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။
အစ်မဖြစ်သူက မုဒိမ်းကောင်း မူဆင်လင်ကုလားနှင့်ပတ်သက်နေလို့ မိဘများက တားမြစ်ထားခဲ့ရာမှ မူဆလင်ကုလားက မသီတာဦးကို စည်းရုံးတာပါ။ အစ်မဖြစ်သူနှင့် အဆက်အသွယ်ပြန်ရအောင် မသီတာဦးကို စောင့်ကြည့်ပြီး အကူအညီတောင်းတာပါ။
မသီတာဦးက ထုံးစံအတိုင်း အန္တရာယ်ကိုမမြင်ဘဲ အရပ်ထဲက အိမ်ဆိုင်တစ်ခုမှ ဈေးဝယ်ပြန်လာရင်း မူဆလင်ကုလားမေးတာကို အရေးတယူ ပြန်ဖြေမိတာပါ။
မူဆလင်ကုလားက ဟန်းဖုန်းထဲက ထူးဆန်းတာလေးတွေပြရင်း တစ်လှမ်းချင်း လမ်းဘေးကန်ဘောင်ရိုးပေါ် ခေါ်သွားတာပါ။ ကန်ဘောင်ရိုးလည်းရောက်ရော ကိလေသာတိုးပွားရေး စိတ်ကြွဇာတ်ကားတွေပြပြီး မုဒိမ်းကျင့်တာပါ။
လမ်းဘေးဆိုတော့ လူသွားလူလာတွေ မပြတ်လို့ ကယ်တင်လိုက်နိုင်တာပါ။ ကလေးမလေးက အကျင့်ခံလိုက်ရပြီး မြင်သူသုံးဦးက ကယ်တင်လိုက်နိုင်ကာ ရပ်ကွက်ကို အကြောင်းကြားလို့ 31.1.2013 ရက်နေ့မှာ မုဒိမ်းကောင်ကုလားကို သာကေတရဲစခန်းမှာ ဖမ်းထားပါပြီ။
မနေ့ည- 31.1.2013-ရက်နေ့မှာ သတင်းရပေမယ့် ဓမ္မခရီးထွက်နေချိန်ဖြစ်လို့ ဒီနေ့မနက်မှ သတင်းတင်လိုက်ရတာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပူပူနွေးနွေးမုဒိမ်းမှုလေးပါနော် ဖတ်ကြည့်ပါဦးလား....။
သတင်းအပြည့်အစုံနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း ရဲစခန်းအမှတ်၊ နှစ်ဖက်နေရပ်လိပ်စာတွေကို စောင့်မျှော်ရှုစားကြပါဦး....။
ပန်းဘဲတန်းမုဒိမ်းမှု၊ ကျောက်တံတားမုဒိမ်းမှုတွေကလည်း 2013- Happy new year ထဲမှာ အသစ်ကလေးတွေပါပဲ။ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းနေဆဲဖြစ်လို့ သည်းခံပါနော်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားများက မူဆလင်အမျိုးသမီးများကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ အမှုမျိုးပေါ်ပေါက် ရင်လည်း သတင်းပို့ကြပါနော်။ ကူညီပါရစေဗျာ။ တကယ်ပါ။
ဒီစာကို မဖတ်ခင် ကျွန်တော် တစ်ခုလောက်ပြောပါရစေ အင်တာနက် သုံးတဲ့ အမျိုးသမီး အားလုံး ဖတ်မိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်....... အမျိုးကောင်းသမီးများသို့ အင်တာနက် မင်းသမီး မဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ဆေးကို ဒီတပတ်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု ကဏ္ဍကနေ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် နေပြီဖြစ်တဲ့ အင်တာနက်ရဲ့ ကောင်းကျိုး တွေကတော့ ဖော်ပြလို့ မကုန်နှိုင်အောင် များတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အင်တာနက် နည်းပညာ တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေလဲ မခွဲမခွာတွဲပါ လာတာ ကိုလဲ မြင်နေရ ပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အဆင့် အလှမ်းကွာနေတဲ့ spyware, mailware, virus စတာတွေကို မပြောလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့ မျက်စိထဲ ကန့်လန့်ဝင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာက အမျိုးကောင်းသမီး တွေရဲ့ ဘာညာကိစ္စ ဓါတ်ပုံ/ဗီဒီယို များစွာကို ကာယကံရှင် မသိပဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာ စေတနာ ကြီးမားစွာနဲ့ ဝေငှ (share) အလုပ်ခံနေရတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါကို ဒီအတိုင်း ထိုင်ကြည့် နေ လို့တော့ မဖြစ်တော့ ဘူးထင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးချင်လို့၊ လူသိများချင်လို့ (ဒါမှမဟုတ်) ၀ါသနာအရ ကိုယ့်ပုံကိုယ်တင် တာဆိုရင်တော့ လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လဲ ကြည့်ရှု အားပေးပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ဆို ရိုးရိုးသားသား နေတာ ကို ချောင်းရိုက် ခံရတာတို့၊ ကိုယ့်ချစ်ချစ်နဲ့ လွပ်လွပ် လပ်လပ် နေတာကို မှတ်တမ်းတင် ခံရတာတို့ကတော့ မဖြစ်သင့်ပါ။ အဆိုးဝါးဆုံး ကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို ယုံမှတ်လို့ ပုံ အပ်မိကာမှပဲ ကျောချမှ ဓါးပြမှန်း သိရတဲ့ကိစ္စပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူကကို ဖော်ကောင်လုပ်ပြီး အင်တာနက်ပေါ် တင်ပေးတာပါ။ ဒီကိစ္စကို အမျိုးသမီးများ ကျပ်ကျပ် သတိထား စေချင်တယ်။ တချို့ ဆို ဒီကိစ္စကြောင့် အလုပ် အကိုင်ထိခိုက်၊
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာ မပြရဲအောင် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့ အရင်းခံကတော့ မသိနားမလည်မှု၊ နည်းပညာ မကျွမ်းကျင်မှု ကြောင့်ဆိုတာ တွေ့နေရပါတယ်။ အမျိုးကောင်း သမီးများ အနေနဲ့ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေက ရှောင်လွဲနှိုင်အောင် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပေးချင်တယ်။ ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာ သင်တန်းဆရာ တစ်ယောက်ပါ။ ပြီးတော့ ပညာရှင်အဆင့် ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို ၇ိုက်ကူးသူ တစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပေးတဲ့ နည်းလမ်းတွေက အမတို့ ညီမတို့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာကို တတ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်ပေး နှိုင်မယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်။ ၁။ ဘယ်သူ့ကိုမျှ မယုံပါနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ် ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ရင်းနှီးနှီး လွပ်လွပ် လပ်လပ် နေတာကို မှတ် တမ်းတင် မခံပါနဲ့ ။ သူကိုယ်တိုင်က စိတ်ချရသော်လဲ သူ့ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်ပဲ သူဆီကကိုယ့် ဓါတ်ပုံကို သူများခိုး သွားတာမျိုး ခံရတတ်ပါတယ်။ ၂။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ မှတ်တမ်း မတင်ပါနဲ့ကိုယ့် ကိုယ်လုံး ဘယ်လောက် လှသလဲ သိချင်ရင် မှန်ထဲမှာပဲ စိတ်တိုင်းကျ ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ ဓါတ်ပုံရိုက် မကြည့်ပါနဲ့။ အဲဒါလဲ အွန်လိုင်း မင်းသမီးဖြစ်ဖို့ လမ်းစပါ။ ၃။ကင်မရာထဲမှာ၊ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ (delete) ဆိုတိုင်းလဲ စိတ်မချပါနဲ့ ကင်မရာထဲမှာ၊ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ဖျက်လိုက်ပြီ ဆိုတိုင်းလဲ စိတ်ချရတာ မဟုတ်ပါ။ အစွမ်းထက်သော recovery software မြောက်များစွာ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီ့ဆော့ဝဲ တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် နှစ်နှစ် လောက်က ဖျက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယို တွေကို အလွယ်တကူ ပြန်လည် ရှာပေး နိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပြင် ဆရာတိုင်း လိုလို လုပ်တတ်ပါတယ်။ ကို့ကင်မရာနဲ့ စိတ်ကြိုက် ရိုက်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ဖျက်ပစ် လိုက် တယ် ဆိုပေမယ့် သာမန် ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်ဟာ ဒါတွေကို အလွယ်တကူ ပြန်လည် ရယူ နိုင်တာကို လုံးဝ မမေ့ ပါနဲ့။ ၄။ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာနဲ့ သုံးရင်လဲ သတိထားပါ။ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ကိုယ့် လက်ပ်တော့ပ် နဲ့သုံးရင် ကိုယ့်လက်ပ်တော့ပ်ထဲက အချက်အလက်ကို အင်တာနက်ဆိုင်က အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု ကော်ပီကူး ထားနိုင် တယ် ဆိုတာ သိထားပါ။ အင်တာနက် ဆိုင်တွေမှာ ဆိုင်မှာ ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို ကောင်တာက အလွယ်တကူ ထိမ်းချုပ်
နိုင်အောင် network စနစ် တစ်မျိုး ချိတ်ဆက် ထားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က အဲဒီဆိုင်မှာ အင်တာနက် သုံးတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကလဲ အဲဒီစနစ်ထဲ ကို အလိုလို ရောက်သွားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အင်တာနက် ဆိုင်ကောင်တာကနေ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို နက်ဝါ့ခ် ကနေ ၀င် ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာနက် ဆိုင်မှာသုံးမယ့် ကိုယ့်လက်ပ်တော့ပ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ့်ပုံတွေ ထည့် မထားပါနဲ့။ ၅။ နည်းပညာကို အထင်မသေးပါနဲ့ ကိုယ့်လက်ပ်တော့ပ်ထဲမှာ ပုံတွေထည့် မထားပါနဲ့၊ မလုံခြုံပါဘူး ဆိုတော့ နည်းနည်း နားလည်တဲ့ ကိုကို၊ မမတွေက share ပေးမထားရင် ရပါတယ်လို့ ဆိုကြတယ်၊ ဟုတ်ကဲ့ နည်းပညာ ကို အထင်မသေး ပါနဲ့ ခင်ဗျား ၊ ကိုယ့်ထက် ပိုတော်တဲ့ ဆရာကြီးတွေ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာလဲ မေ့မထားပါနဲ့။ cracker တို့ hacker တို့ဆိုတာ အလကား ပေးထားတဲ့ နာမည်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကပြောမယုံ ကြုံဖူးမှ သိလောက်အောင် မြင့်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘက်က စိတ်ချရအောင် သတိရှိတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ၆။ အင်တာနက်မှာ တွေ့တဲ့သူကို မယုံပါနဲ့ အင်တာနက်က တော်ကီ ကိုကိုတို့ကပဲ အပြောကောင်း သလား၊ အွန်လိုင်း မမ တွေကပဲ အညှာလွယ်သလားမသိပါ။ vzo chat လို ဟာမျိုးနဲ့ ချွတ်ပြ၊ လှန်ပြတဲ့ မမတွေ ၊ ညီမတွေ ရဲ့ပုံများ အင်တာနက် ပေါ်မှာ တွေ့နေရပါတယ်။ (ကျွန်တော် အသုံး ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ) ၀မ်းနည်း စရာကောင်း တာက ပါးကွက်ကျားနဲ့ ထမီနဲ့ ဗမာမလို့ ထင်းခနဲ သိသာတဲ့ ပုံ တွေပါ အများကြီး ပါလာတာပါ။ ကြေးစား တွေပါလို့
ပြောရအောင်လဲ အိမ်မှာ ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက် လိုင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာနဲ့ သုံးနိုင်တဲ့ အဆင့်က ကြေးစား မဟုတ်နိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတာက အွန်လိုင်း ကိုကိုကလဲ အပြောကောင်း၊ ညီမလေး တို့ကလဲ သဒ္ဒါလွန် တယ် ထင် ပါတယ်။ မယုံကြပါနဲ့ ညီမလေးတို့ရယ်။ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ သူဆိုတာ နှစ်ယောက်ချင်း ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ မှားချင် မှားမယ်၊ အဲဒီလို ဗြောင်ကြီးတော့ မတောင်းဆိုပါဘူး။ အဲ ….. ကိုယ့်သိက္ခာကို ရင်းရဲတယ် ဆိုရင်တော့ လုပ်ပေါ့။ (VZO က အရုပ် တွေ အသံတွေ မှတ်ထားလို့ ရတယ် ဆိုတာလဲ သတိရပါ။) ၇။ခိုးအရိုက် ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ်မရင်းနှီး မကျွမ်းဝင်တဲ့ နေရာမှာ (ဟော်တယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ ပန်းခြံ) စတဲ့ နေရာတွေမှာ လွပ်လွပ် လပ်လပ် မနေပါနဲ့။ သတိရှိပါ။ ကင်မရာတွေ အကြောက်ဆုံး၊ အားနည်း ချက် တစ်ခုကတော့ အမှောင်ပါ။ ဘယ်လောက် ကောင်းတဲ့ ကင်မရာမဆို အလင်းရောင် အားနည်းသော နေ ရာမှာ အဆင် မပြေနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်မချရသော နေရာများတွင် လွပ်လွပ် လပ်လပ် ( ဥပမာ အ၀တ်အစား လဲတာ) နေရတော့ မယ် ဆိုရင် လုံးဝ မှောင်သွား အောင်လုပ်ပါ။ ဒါဆို ကင်မရာတွေ မတတ်နိုင်တော့ပါ။ အမှောင်ထဲမှာ ရိုက်နိုင် တယ် ဆိုတဲ့ (Night Shot) ဆို တဲ့ ကင်မရာ တွေတောင် အနဲဆုံး အနီရောင် ရောင်စဉ်လေး လင်းမှ အလုပ် ဖြစ် တာပါ။ ၈။ spy camera တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ရှာပါ အခုခေတ်မှာ သုံးသောင်း လောက်ဆို spy camera တစ်လုံး ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်မချရတဲ့ နေရာတွေမှာဆို spy camera တတ်ထားမထား တတ်နိုင် သလောက် ရှာပါ။ ဒါ ကိုကိုတွေ၊ ဦးဦး တွေ အတွက်လဲ အရေးကြီးပါတယ်။ တော်ကြာ ကိုယ်တောင် မသိပဲ နာမည်ကြီး အွန်လိုင်း မင်းသား ဖြစ်သွား နိုင်ပါတယ်။ များသော အားဖြင့် ကင်မရာတွေကို မြင်ကွင်း ကျယ်ကျယ် ရအောင် ဒေါင့်တွေမှာ တတ်ထား တတ်ပါတယ်။ သေသေ ချာချာ ရှာပါ။ အခန်း အပြင်မှာ
တတ် ထားပြီး မတ်စေ့ လောက်အခန်းကို ဖောက်ထား တာမျိုးလဲ လုပ်တတ် ကြပါတယ်။ မသင်္ကာဖွယ်ရာ အပေါက်တွေကို ဒေါင့် တွေ မျက်နှာ ကျက်တွေမှာ သေချာရှာပါ။ ဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုပြီးလဲ စိတ်ချမနေပါနဲ့၊ လိုအပ်ရင် အမှောင်ကို အကာ အကွယ် ယူပါ။ အဲ super market တွေက အ၀တ် လဲခန်းတွေမှာလဲ ရှိတတ်တယ်နော်၊ လုံခြုံရေး
အတွက် တတ်ရတာပါ ဆိုပဲ။ ၉။ ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အွန်လိုင်း မင်းသား မင်းသမီး ဖြစ်သွားပြီ ဆိုရင် ရောရှက်ပြီး ငြိမ်မနေပါနဲ့၊ သိပ်မပျံ့သေးမှီ တားဆီးပါ။ Sex ၀က်ဆိုက် တော်တော် များများ ဟာ User က တောင်းဆိုလို့ ရှိရင် အချက် အလက်တွေ ဖျက်ပေး ပါ တယ်။ ကိုယ့် ပုံ ပါနေတာ သေချာရင် အဲဒီ ၀က်ဆိုက်ကို အကြောင်း ကြားပြီး ဖျက်ခိုင်းပါ။ အဲဒီလို အကြောင်း ကြားလို့ ဖျက်ပေးတာ သုံးခါ လေးခါတွေ့ ဖူးပါတယ်။ ၁၀။ ကိုယ်ချင်းစာပါ။ တွေ့ဖူးပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေမှာ အမျိုးသား ကိုယ်တိုင်က တင် တာ ဆိုတော့ သူ့မျက်နှာတော့ သူဖျက်ထား တာတွေ့ဖူးတယ်။ ဒါ ကိုယ်ချင်း မစာတာပါ။ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ ထက်ပိုရှက် တတ်တာပေါ့။ ကိုတောင် ရှက်တတ် သေးရင် သူများ အရှက်ကွဲ အကျိုး နည်း ဖြစ်အောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါ စေတနာ ဗလဗွနဲ့ မျှဝေတတ်တဲ့ ကိုယ်ချင်း မစာတဲ့ အမျိုးသားတွေ အတွက်ပါ။ ခိုးလဲ မရိုက် ကြပါနဲ့။ ကိုယ့်ကို ချစ်လို့ အလိုလိုက်ထားတဲ့ သူကိုလဲ မျက်နှာလွဲ ခဲပစ် မလုပ်သင့်ပါ။ ဇာတ်လမ်း အသစ်တင်ချင် တယ်ဆိုရင် လဲ ကြေးစား အဆင့် ထဲ မှာ အရိုက်ခံတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ လှုပ်ရှားပေါ့။ နောက်ဆုံးအဆင့် မျက်နှာလေး ဖျက်ပေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်တော့ မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးကြပါ။ အင်တာနက်ဆိုတာဟာ လူ့ အကျိုးသယ်ပိုးဖို့ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ ဒါကို အကျိုးမရှိတဲ့ နေရာမှာ သူများ အကျိုး ထိခိုက် အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့။ (ဒါက Sex
Website တွေကို မကြည့်ပါနဲ့လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ တော်ကြာ ကိုကိုတို့က စိတ်ဆိုး နေဦးမယ်။ နာမည်ကြီး ချင်လို့တို့၊ ၀ါသနာအရတို့ ဆိုတဲ့ ရုပ်ပုံ တွေ
ဗီဒီယိုတွေ ဆိုရင်တော့ ရောင်းသူ ၀ယ်သူ အသံတူရင် ပြီးတာပါပဲဗျာ။) အမျိုးကောင်း သမီးများကို ညှာတာဖို့ ပြောတာပါ။ စင်္ကာပူဖီး
(မှတ်ချက်...ကြောင်ကြီးစီ ရောက်လာရင်တော့ တင်ပြီးသားပဲ) ဒီပို့တင်ခဲ့သောသူ
စင်ပေါ်တွင် အမျိူးသမီး၏ စကတ်လှန်ကြည့်ခြင်း /ရင်သားကိုင်တွယ်ခြင်း /အမျိူးသမီးအကျီဆွဲလှန်ကြည့်ပြခြင်းတို့ မှာ အနုပညာမည်သည်ပါလား..။
စင်ပေါ်တွင် အမျိူးသမီး၏ စကတ်လှန်ကြည့်ခြင်း /ရင်သားကိုင်တွယ်ခြင်း /အမျိူးသမီးအကျီဆွဲလှန်ကြည့်ပြခြင်းတို့ မှာ အနုပညာမည်သည်ပါလား..။ ..... စိုင်းစိုင်း ၊စန္ဒီနှင့် ယုန်လေး တို့ဆွဲဖွင့်လိုက်သောယဉ်ကျေးမှူတံခါးများ မြန်မာဟစ်ဟော့ဂီတလောကတွင် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိူင်နှင့်ယုန်လေးတို့ ၏ အနုပညာများကိုလူငယ်များသာမက လူလတ်ပိုင်းများပါ အရူးအမူး စွဲလန်းကြသည်။လူငယ်တို့ ၏ စံ အဖြစ်ပင် သတ်မှတ်လောက်အောင် ချွန်ထွက်သော အနုပညာရှင်များ ဖြစ်လာကြပါသည်။ သို့သော် ပွင့်လင်းမြင်သာမှူနှင့် ယခင်အစိုးရ၏ ပိတ်ပင်မှူတို့ကို ရုတ်တရက်ဖွင့်ချလာသောအခါ စပိန်ရိန်တစ်ခုကို ဖိထားသည်မှ ရုတ်တရက် လွှတ်လိုက်ကဲ့သို့ ဗြုန်းခနဲ ခုန်ထွက်လာကြပါသည်။ ဤသို့လူငယ်များ၏ စံ အနုပညာရှင်များ၏ အပြုအမူသည် လူငယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးမူရှိ ခြင်းကြောင့် အနုပညာ၏ အစွမ်းကို အလွယ်သုံးစား လုပ်၍ မရပါ...။ ယခု အခါ အနုပညာသမားများ၏ ပြည်သူကိုထုတ်ပြသော ဝတ်စားဆင်ယင်မူများကလည်း မြန် မာ မျက်စိဖြင့် မသင့်တော်သော ဒီဇိုင်းများဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးလာကြပါသည်..။
မော်ဒယ်များ၏ SEXY ပုံများ ဗီဒီယိုများသည် အင်တာနက်စာမျက်နှာနှင့် +18 ဟုခေါ်သော ကာမဆိုင်ရာ အပြာဆိုဒ်များတွင် ထိုသို့ဝတ်ဆင်သော အနုပညာရှင်များ၏ ပုံများက နေရာပြည့်လျှက်ရှိသည်။အချိူ့မော်ဒယ်များကလည်း တမင်ပင် ထိုသို့ဝတ်ဆင်ကာ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံသည်။ စပွန်ဆာ ရှာသည်ဟုပင် တွယ်ကျင်လာသည် ။
မြန်မာလူငယ်များအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီသဘောတရားကို နားမလည်ကြသေးပဲ ဒီမိုကရေစီရသည်ဆိုသည်မှာ မိမိလုပ်ချင်တာကို လုပ်လို့ရသည်..။တရားဥပဒေနှင့်ညှိစွန်းမှသာ အရေးယူထောင်ချခြင်းခံရမည်.။သို့မဟုတ်ပါက
မိမိနေချင်သလိုနေ လုပ်ချင်သလိုလုပ်၍ ရခြင်းကို ဒီမိုကရေစီဟုခေါ်သည် ဟု သတ်မှတ်နေသည်မှာ လွန်စွာ သနားဖွယ်ကောင်းလှသည်။ မြန်မာလူမှူပတ်ဝန်းကျင်တွင် ချစ်သူချင်း Kissing နှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့စုပ်နမ်းခြင်းကို ဗြောင်ပြူလုပ်လာသည်.။အနုပညာရှင်များကလည်း ယခင်က ဆင်ဆာမိ၍ ခိုးထွက်လာသော +18 သီချင်းများကို ဗြောင်ပင် စင်ပေါ်တတ်ဆိုလာသည်။လမ်းမပေါ်၌ ဆိုင်ကယ်အုပ်စုမောင်းခြင်းများ ယာဉ်စည်းကမ်းနှင့် မညီညွှတ်သော နည်းလမ်းများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ကို ဒီမိုကရေစီအားသားချက်ဟု ထင်နေသည်..။ သမီးရီးစားများ ကာမဆက်ဆံနိုင်ရန် အခန်းများငှားခြင်းကို ဆိုင်းဘုတ်ကြီးများတင်၍ ကြေငြာလာကြသည်။ထိုလုငယ်များ၏ ပါးစပ်က တောင့်တနေသော ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည်မှာ အဘယ်ကိုဆိုလိုပါသနည်း။ စိုင်းစိုင်းနှင့်စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ ၏ လူငယ်များ စံထားရာ အားကျစရာ အတုယူစရာ ဖျောဖြေမှူ ယခုလည်း ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ယုန်လေးနှင့်စိုင်းစိုင်းတို့ ၏ ပရိသတ်ဖြေဖျော်မှူ ကို လွန်စွာ ရွှံမုန်းဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါသည်.။ ယခင်က အထင်ကြီးခဲံ့သော စိတ်များ မြောင်းထဲသို့ လွှင့်ပစ် လိုက်ပါသည်။စင်ပေါ်တွင် အမျိူးသမီး၏ စကတ်လှန်ကြည့်ခြင်း /ရင်သားကိုင်တွယ်ခြင်း /အမျိူးသမီးအကျီဆွဲလှန်ကြည့်ပြခြင်းတို့ မှာ အနုပညာမည်သည်ပါလား..။ ယုန်လေး၏ အထင်ကြီးဖွယ်လေးစားဖွယ် ဖျော်ဖြေမှူ အဘယ်နည်းးးး မြန်မာနိုင်ငံသို့အဘယ်ယဉ်ကျေးမှူများ သွတ်သွင်းနေပါသနည်း.. ထိုသို့ ဖျော်ဖြေလိုပါက အနောက်နိုင်ငံက ကလပ်များတွင် သွားရောက်ဖျော်ဖြေပါ သို့မဟုတ် အိမ်နီးချင်း ထိုင်း နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ ဖျော်ဖြေမှူလုပ်ပါ.. မြန်မာ လူမျိူး မဟုတ်ပါလော.. မြန်မာ လူမျိူးများလက်ခံသော အနုပညာကို သာ တင်ဆက်ကြပါ...။အနုပညာရှင်များ လိုချင် သော ဆင်ဆာ ကင်းလွတ်ရေး အော်ဟစ်နေမှူကို ယခင်က အားပေးသော်လည်း ယခု အခါ သံသယ ဝင်လာပါတော့သည်။ မကြာသေးခင်ကာလက လည်း စင်ပေါ်တွင် ဖာ လုပ်မည် သီချင်းကို ဗြောင်သီဆိုသည်ကို
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အနုပညာသူရဲကောင်းကြီးသဖွယ် အဲ အခန်းဖြတ် ဇာတ်ကားဖြင့် နာမည်ကျော် ဒါရိုက်တာကြီးက မည်သို့မျှမတားဆီးပဲ မဝေဖန်ပဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပါ သည်။ ဆိတ်ဆ်ိတ်နေခြင်းသည် ဝန်ခံရာ ရောက်သလို အားပေးရာလည်းရောက်သည်။ အဆိုပါအနုပညာရှင်တို့ ၏ လူရှေ့သူရှေ့တွင် အနုပညာကို မည်မျှချစ်ပါသည်။မည်မျှမြတ်နိုးပါသည်။အနုပညာ ကိုတိုးတတ်အောင် မည်သို့ကြိူးပမ်းမျှ စကား တို့ကို ယခုအချိန်မှစ၍ ဘီဘီစီမှလာသော ဟာသ သတင်းများကို နားဆင်သကဲ့သို့ပြုံးပြီးသာ နားထောင်နေတော့မည်ဖြစ်သည်။
ကုလားတစ်ယောက် မြန်မာမတစ်ယောက်ကို အဲ့လို လုပ်လို့ ရပါတယ်ဆိုပြီး y-tube မှာပါလာပါတယ်... မြန်မာတွေ အကျင့်ကို အဲ့မှာ မကြိုက်တာ အဲ့အချိန်မှာ ဆဲပြပါလိမ့်မယ်... ဘယ်သူမှ ကုလားမ တစ်ယောက်ကို ဖဲ့နေတဲ့ ဟာ မတင်ဖူးသေးဘူး... တင်လိုက်စမ်းပါ ကြောင်ကြီး ကမ်ဘာကျော်အောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါ့မယ်... တကယ့်တကယ်ကြတော့ မြန်မာတွေ အဲ့ဒီနေရာမှာ ခံရတာပဲ... လုပ်ပြလိုက်ကြစမ်းပါ....
ဘာသာပြန်ပေးစရာ မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မှာပါ။ မိန်းကလေးတွေ Social ကျရင် ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ သင်ခန်းစာယူဖို့။ 1 Sichuan University students to take
part in celebration on Saturday night. She felt happy and drankalot of wine, thenayoung guy sitting in front of her. In all flirt flirting
with the boys, the girls finally agreed to with this handsome guy went to hotels near, and openedaluxury package. The room, the girls drank more wine, she slowly began to feel awake, and then fell asleep. When the girl woke up, found his body ** in tub and bathtub
Full of ice. Note next to the tub, above red letters with the words "120, or you will die! "Her phone next to the note. She dialed. And explain your current situation. Doctors recommended that she check her back, and she found two nine-inch long cut wound in the lower back!!! Doctor wanted her to lie down back to the bathtub full of ice, told her not to move, immediately have the first aid team to find her. It turns out that her kidneys were stolen! The two ports, is to remove her kidney
left behind! On the black market, and 1 kidney $ 300,000 worth! Forensic judgments, victims to drink liquor, drug may not simply fans of
Halo, there are powerful narcotic, and ice also plays to the analgesic effect, so victims won't feel pain. The girl died in hospital after waiting forakidney donation to nothing. Police advise everyone: this is 1 new crime is occurring, and to young women and men, tourists, targeting students. Criminal organizations is large, and highly trained personnel. Such criminal acts are taking place in many major cities, especially recently in Shandong, Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Xiamen, Quanzhou and Beijing, Shanghai, Sichuan, Chongqing, and bars all over the country!! To any 1 person you care about, to the people you know! Apai Miggol မရှောင်ရင် ကြောင်ကြီး ဘလော့ပေါ်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ထက်ဆင့် သတိပေးလိုက်ပါတယ်...
From : .စင်္ကာပူဖီး KIA တပ်မဟာ(၅) နယ်မြေ တပ်ရင်း(၃)တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အဓမ္မပြုကျင့်မှု ခဲ့သောတပ်ရင်း(၃)၏ နောက်တန်း လုံခြုံရေး အရာရှိဖြစ်သူ လဖိုင်လ အား ယနေ့ ဇန်န ဝါရီ လ၁၇ ရက် နေ့နံနက် ပိုင်းကလွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါ အရာရှိသည် ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသော တပ်ကြပ် ဇော်ဆိုင်း ၏ ဇနီး ဖြစ်သူမရှန်ပူအား အိမ်တွင် တစ်ယောက်တည်း အိပ်ပျော် နေခိုက် အိမ်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ကာ အတင်း အဓမ္မပြုကျင့်မှု ကို ပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၄င်းအရာရှိအား ယခုတွင် တပ်မဟာ(၅) ဌာနချုပ်၊လေ့ ကျင့် ရေးဌာန တွင် တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေကြောင်း သိရှိရသည်။ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူမရှန်ပူအားတပ်ရင်း(၃)တပ်ရင်းမှူးကစစ်ဆင်ရေးလို အပ်ချက်အရဟုပြောဆိုကာစစ် သင်တန်း ကိုဇန်နဝါရီလ၁၅ရက်နေ့ ကတက်ရောက်စေပြီး၎င်းသင်တန်း ဆင်းပါက လိုင်ဇာ ရှိဆေးတပ် တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ယခုအခါ လိုင်ဇာ တွင်ရှိသော အရာရှိဇနီးမှလွဲပြီး စစ်သည်များဧ။်ဇနီးများအားဇန်နဝါရီလ၁၅ရက်နေ့ မှစတင်ကာစစ်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် အတွက်လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဝတ်လဲခန်းထဲက ကင်မရာ အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ Hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တပ်ဆင်ထားမထား........
အ၀တ်အစားလဲခန်း..... (အ၀တ်အထည်အသစ်တွေကိုစမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ကြည့်တဲ့အခန်း) တွေမှာ
မသမာသူတွေက hidden camera (လျှို့ဝှက်... ကင်မရာ) တွေ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကတော့ မိမိမှာပါလာတဲ့ mobile phone
၃။ ဖုန်းခေါ်လို့မရဘူးဆိုရင် အဲဒီအ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ Hidden
camera ရှိနေဖို့များသွားပါပြီ။ ဖုန်းခေါ်မရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော
့Hidden camera ရဲ့ ဖိုင်ဘာကေဘယ်က Mobile phone လိုင်းကို
အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလို့ပါပဲ။မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်... မိမိတင်လိုသည်များကိုလည်း royalbigcat2013@googlemail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်.. Blogger ကြောင်ကြီး
ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် စေခိုင်းခံရသူ မြန်မာအမျိုးသမီး၁၀ဦးပါဝင် ၅ ဦးဟာ အသက်မပြည့်တဲ့သူတွေ ဖြစ်နေ
ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ညက ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် စေခိုင်းခံရသူ မြန်မာအမျိုးသမီး၁၀ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး အဲဒီထဲက ၅ဦးဟာ အသက်မပြည့်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
မုဒိန်းမှုဆိုရင်တော့ ကြောင်ကြီးကတင်မှာပဲ ဘယ်သူ ဘယ်အဖွဲ့ အစညါးကဖြစ်ဖြစ်(လိုအပ်ချက်ကြောင့် ညပိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်စားရသော မိန်းကလေးများအား KIA ခေါင်းဆောင် များမှ ခေါ်ဆောင်၍ သားမယား အဖြစ် ပြုကျင့်)
အစိုးရတပ်များနဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်း KIA ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိတဲ့ ရွာတွေက လူအားလုံး လိုင်ဇာမြို့ ကို ရွှေ့ခိုင်းပြီး ဒုက္ခသည်များအဖြစ် နေထိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ဆန်နဲ့စားစရာ အသင့် အတင့် ရရှိပြီး အချိန်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့နောက်မှာ ထမင်းဝအောင် မစားရတဲ့ အခြေ အနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း ရောက်ရှိလာသူများထဲက ကျန်းမာ သန်စွမ်း သူအ မျိုး သား များ ကို KIA လက်နက် ကိုင် အဖြစ် ၀င်ရောက်စေပြီး ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးနှ င့် မိုင်းေ ထာ င်ဖောက် ခွဲ ရေးတာဝန်များ ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ အတွက် တိုက်ပွဲတွေမှာ သေဆုံးသူ၊ ထိခိုင်ဒဏ် ရာရသူ အများအပြား ရှိနေ၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလိုသော်လည်း ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတဲ့ သားသမီး၊ ဇနီး၊ မိသားစုများမှာ KIA ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ ရှိတဲ့အတွက် ထွက်မပြေး နိုင်တာကြောင့် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင် နေကြရ ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှုတွေ အတွင်း သေဆုံးသွားသူ တွေရဲ့ မိသားစုတွေမှာ မည်သည့် ထောက်ပံ့မှုမှမရဘဲ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ အမှန် တကယ် ဒုက္ခရောက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းများ ရရှိပါတယ်။ မြို့ပေါ် ဒုက္ခသည်စခန်းရောက် အချို့မိသားစုများတွင် ၎င်းတို့၏ ခင်ပွန်းနှင့် သားသမီးအချို့ တိုက်ပွဲတွင် ရာမှာလည်းကောင်း၊ မိုင်းထောင်ရာမှာလည်းကောင်း သေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာ လူသိမှာစိုး၍ ပွင့်လင်းစွာ ပင် ငိုကြွေးနိုင်မှုမရှိကြောင်း၊ ဆုတောင်းပွဲများလည်း မလုပ်ရဲ
ဖြစ်နေကြပါတယ်။ KIA နယ်မြေရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းမှ မိသားစုများမှလည်း KIA ၏ ထိန်းချုပ်ထားမှု ကြောင့် လည်းကောင်း၊ အသိမပေးဘဲ လျှို့ဝှက်ထားခြင်း ကြောင့်
လည်းကောင်း များစွာဒုက္ခရောက် လျက်ရှိပါတယ်။
အစိုးရက ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသော ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ရှိနေသူများမှာလည်း စားသောက်ရေးမှာ ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများကြောင့် အဆင်ပြေနေသော်လည်း ၀င်ငွေရသော စီးပွားရေး မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ကျန်း မာရေး လိုအပ်ချက်များ ရှိလာပါက အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်းကြောင့် အရွယ် ရောက်သော မိန်းမပျိုလေး များနှင့် ညဦး ပိုင်း နှင့် ညဥ့်နက်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်၍ ငွေကြေး ရှာဖွေနေရခြင်း၊ထိုသို့လုပ်ကိုင်ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရန် KIA များနှင့်တွေ့လျင် စခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရပြီ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ သားမယား အဖြစ် ပြုကျင့် ချင်းများကိုလည်း ခံရခြင်း၊လူငယ်များမှလည်း ဖိစီးမှုများကြောင့် မူးယစ် ဆေးဝါးသုံး စွဲခြင်း၊ ပစ္စည်းများခိုးယူခြင်း၊ လုယက်မှုကျူးလွန်နေခြင်းတို့ကြောင့် ညပိုင်းအပြင်သွား လာမှုများ အခက်အခဲနှင့်
ကြုံတွေ့ လျက်ရှိ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်နေရတာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် ကချင် ပြည်နယ် ကိုချစ်ပါတယ်ဆို တဲ့ ကေအိုင်အေခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်ဖြစ်နေရပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် ကိုတယ်ဆိုပြီးသူတို့၏ စီး ပွားရေး၊ အာဏာ ရရှိရေးတာကြည့်နေတာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အလှမ်း ကွာဝေးနေလျက်ရှိသည်။ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း နှစ်ဘက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စီးပွားရေး အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲ သူများပြားခြင်း၊ မိန်းကလေးများ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြား ခြင်း၊ ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက်မှုများပြားလာခြင်းကြောင့် အရပ်သားပြည်သူများနှင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ဒုက္ခသည်များ အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန်ဆုံးရရှိစေရန် ဆန္ဒရှိကြပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ရက် နေ့ ကKIAမှလူမဆန်စွာအုပ်စုဖွဲ့ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တဲ့KIAသောင်းကျန်းသူ၅ဦးအနက်မှ၎ဦးအားဒီနေ မွန်းလွဲ၂နာရီကနန့်မွန်းကျေးရွာအပြင်ဘက်၅မိုင်အကွာတွင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းမြန်မာ့မျိုးချစ်တပ်မတော်၊တပ်ရင်း(.....)
့တပ်ရင်းနန် လတ် ချောင်းမှာ အထိနာပြီး အုပ်စုကွဲသွား တာ ဖြစ်ပါတယ်..ဒါနဲ့ဒီကောင်တွေခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးပြီးနီးစပ်တဲ့နန့်ဆန်ယန်ရွာနားမှာကပ်နေတာပါ...ဒါနဲ့ကောင်
့ မသတ်ပါဘူး..တရားဥပဒေ အတိုင်းဆောင်ရွက်မှာပါ" ဟုပြောသည်။နန့်ဆန်ယန်ရွာမှကချင်တိုင်းရင်းသားများကတုတ်၊ဓါးကိုယ်စီကိုင်ပြီး
့သို့ ပို့ ဆောင်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ ဒီပို့တင်ခဲ့သောသူ
ကြောင်ကြီး ဘလော့နဲ့ နိုင်ငံရေးမဆိုင်ပေမယ့်... ဒီလိုမုဒိန်းမှုမျိုးတော့ ဆိုင်လာပြီလို့ ထင်တယ်... ဒီပို့တင်ခဲ့သောသူ